कोरोना शंकास्पद पुुरुषको कोशी अस्पतालमा मृत्यु – BFM 91.2
कोरोना शंकास्पद पुुरुषको कोशी अस्पतालमा मृत्यु
विराटनगर, २९ साउन । विराटनगरको कोशी अस्पतालमा कोरोना भाइरस शंकास्पद पुरुषको आज दिउँसो मृत्यु भएको छ ।
श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि ल्याइएका विराटनगर महानगरपालिका –१५ का ३० वर्षीय पंकज गुप्ताको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. चुमनलाल दासकाअनुसार मृतकमा केही दिनदेखि ज्वरो आउने लगायत कोरोनासँग मिल्ने लक्षण देखिएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य अवस्था थप गम्भीर बन्दै गएपछि उनलाई उपचारका लागि बिहान १०ः३० बजेतिर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । तत्काल आइसोलेसनमा लगेर उपचार सुरु गर्दै कोरोना परीक्षणका लागि ११ बजेतिर गुप्ताको स्वाब संकलन गरिएको डा. दासले बताउनुभ भयो । उहाँले रिपोर्ट आउनुअघि नै कोरोना शंकास्पद पुरुषको दिउँसो ४ बजेतिर मृत्यु भएको जानकारी दिनु भयो । अहिलेसम्म रिपोर्ट आइसकेको छैन ।
रिपोर्ट आइसकेपछि शव व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ । रिपोर्ट नगेटिभ आएमा अन्त्येष्टिका लागि परिवारको जिम्मा लगाइने र पोजेटिभ आएमा शव व्यवस्थापनका लागि सेनाको विशेष टोलीलाई बुझाइने जानकारी दासले दिनुभयो ।
← विराटनगरमा ६० सहित प्रदेश १ मा १ सय १५ संक्रमित थपिए
विराटनगरमा भदौ ५ सम्म लकडाउन थपियो →
प्रदेशको निर्णय प्रदेशले गर्छ : मन्त्री तुम्बाहाङफे
January 4, 2021 January 4, 2021 Bfm	0
सुन तस्करी अभियुक्त हरिशरण खड्कालाई थुनामा राख्न आदेश